Ozi na ụdị dị iche iche nke Sony Xperia XZ3 agbaala tupu mwepụta ya | Androidsis
Sony ga -egosi ihe ngosi ahụ Sony Xperia XZ3 n'oge IFA 2018, mmemme malitere taa. A na -atụ anya na nke a abụghị naanị ngwaọrụ ụlọ ọrụ Japan kwupụtara n'oge ọgbakọ ya.
A na-ekwu na Sony ga-ewebata flagship ọhụrụ ya Xperia XZ3 n'akụkụ ekwentị etiti akpọrọ Xperia XA3. Na nke mbụ taa, anyị nwere ozi, onye ama ama Roland Quandt ekerịtala foto pịa nke Xperia XZ3, yana nkọwapụta ya.
Quandt kpughere na Xperia XZ3 ga-abịa na ngosipụta 6-inch P-OLED nke LG mere, ga -enwe ọnụ ala, ọ ga -enwe akụkụ nke 18: 9 yana mkpebi nke 2880 x 1440 pikselụ. Bezels nke elu na nke ala ga -ebu ibu n'ihi okwu abụọ agbakwunyere. XZ3 ga -enwe mpaghara pụrụ iche na nsọtụ ihuenyo iji malite ụfọdụ omume.
N'okpuru mkpuchi anyị nwere a Ihe nhazi Snapdragon 845 nwere 4GB Ram na 2.1GB UFS 64 nchekwa, enwere ike enwere ụdị ndị ọzọ nwere nchekwa dị elu. Batrị ahụ ga-abụ 3,300 mAh ma nwee nkwado maka chaja ngwa ngwa site na USB-C. A na -anụ kepu kepu na ọ ga -abụ ngwaọrụ mbụ nwere ya Ejirila gam akporo 9 Pie.
Agbanyeghị na mbụ a na -ekwu maka ihe mejupụtara kamera abụọ n'azụ, mgbapụta ọhụrụ a na -ekwu otu igwefoto megapixel 19 nke ga -enwe bọtịnụ raara onwe ya nye. Maka selfies, XZ3 ga -akwadebe oghere 13 megapixel.
Mgbapụta ahụ wetakwara ihe ntụgharị nke agba dị iche iche ebe Xperia XZ3 ga -abata, enwere ike ịhụ nkọwa ndị a na foto na -esonụ.
Enwebeghị ozi na ọnụahịa nke ngwaọrụ ahụ, ebe ọ dị elu, ọ nwere ike karịa euro 700 n'ụzọ dị mfe, n'agbanyeghị na n'ahịa siri ike ụlọ ọrụ a nwere ike chọọ ịsọ mpi site na ọnụ ọgụgụ pere mpe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Sony » Ozi na ụdị dị iche iche nke Sony Xperia XZ3 na-agbapụta tupu ya amalite